खुसीको खबर : नेपाल एयरलाइन्स ए–३३० जहाजमार्फत चीनमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याइँदैँ ! सक्दो शेयर गर्नुहोस «
खुसीको खबर : नेपाल एयरलाइन्स ए–३३० जहाजमार्फत चीनमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याइँदैँ ! सक्दो शेयर गर्नुहोस
Published : 14 February, 2020 11:38 am
चीनबाट ल्याइएका नेपालीलाई यहाँ १४ दिनसम्म परीक्षणमा राखिनेछ । कोरोना भाइ”रस नदेखिएपछि सार्वजनिक भेटघाटका लागि जान दिइनेछ । सरकारले उक्त भाइरस स”ङ्क्रम”णका लागि तीन अस्पतालमा ४३ श्ययाको व्यवस्था गरेको छ । पोखरा, चितवन र भैरहवामा ‘हेल्थ डेक्स’को व्यवस्था गरेको छ । रसुवा र तातोपानी नाकालाई सम्भावित जोखिममा राखेर काम भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गोंगबु हत्या प्रकरण : कल्पनाको ‘धेरै पुरुषसँगको सम्बन्ध’, अहिलेसम्म ३ विवाह !
गोंगबुमा २४ शनिबारको राति भएको विभत्स हत्या प्रकरणकी अभियुक्त कल्पना मुडभरीको धेरै पुरुषहरुसँग सम्बन्ध रहेको